ဟယ်ရီ ကိန်း နဲ့ ဂရေးလစ်ချ် တို့ကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ မန်စီးတီးဟာ ဘာကြောင့် ပေါင် သန်း 200 ကျော် အထိ သုံးပြီး ကမ်းလှမ်းထားနိုင်ရတာလဲ? - SPORTS MYANMAR
ဟယ်ရီ ကိန်း နဲ့ ဂရေးလစ်ချ် တို့ကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ မန်စီးတီးဟာ ဘာကြောင့် ပေါင် သန်း 200 ကျော် အထိ သုံးပြီး ကမ်းလှမ်းထားနိုင်ရတာလဲ?
By Edi Tor August 4, 2021
ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ မန်စီးတီး ဟာ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် ကစားသမား နှစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဟယ်ရီကိန်း နဲ့ ဂရေးလစ်ချ် တို့ နှစ်ဦးကို စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေးတွေ အထိပေးပြီး ကမ်းလှမ်းလျှက် ရှိနေပါတယ်။
ဒီပမာဏဟာ စုစုပေါင်း ပေါင် သန်း 200 အထက်မှာ ရှိနေသည့်တိုင်အောင် ၊ ရှိတ်မန်ဆော် ရဲ့ ကလပ်က သိပ်ပြီး စာဖွဲ့မနေပါဘူး။
ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါကြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့လို့ ကလပ်အသင်း ငယ်တချို့ ဒေဝါလီ ခံသွားရသလို ၊ ဥရောပ အသင်းကြီးတွေ အများစုလဲ ဝင်ငွေတွေ အများကြီး ကျဆင်းသွားတာကြောင့် ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းမျိုးစုံ နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ မန်စီးတီး ကတော့ ပေါင် သန်း ရာချီတန်တဲ့ ကစားသမားတွေကိုပဲ ပစ်မှတ်ထားနေတာ တော်တော်လေး ထူးဆန်းပါတယ်။
မန်စီးတီး ဟာ ပြိုင်ဘက် ကလပ်တွေ ငွေကြေး ခြွေတာနေရချိန်မှာ ဘာဖြစ်လို့ အခုလို ငွေကြေး သုံးစွဲနိုင်တာလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
အဓိက အကြောင်းပြချက်တွေ ထဲက တခုကို ဆွဲထုတ်ရမယ် ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက သူတို့ အသင်းဖြတ်ကျော်ပြခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ တိုက်ရိုတ် သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ရုပ်သံ ထုတ်လွှင့်ခ အများကြီး ရရှိတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်လို ပြိုင်ပွဲမျိုးမှာ ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့သလို ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာလဲ ဗိုလ်လုပွဲ အထိ ရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပြနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကာရာဘောင် ဖလားကိုပါ ဆွတ်ခူးသေးတာကြောင့် သူတို့ ရဲ့ ဝင်ငွေဟာ တော်တော်လေး ကို ကောင်းလွန်းခဲ့တယ် လို့ မှတ်ချက် ပေးရမှာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီ အပြောင်းအရွှေ့တွေမှာ ဆိုရင် ရူဘင် ဒီယက် ၊ နေသန် အကီ ၊ ဖာရန် တောရက် တို့ကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး စုစုပေါင်း 125 သန်း ဝန်းကျင် အထိပေးပြီး ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် ၊ ဆာနေး ကို ပြန်လည် ရောင်းချမှုကနေ ပေါင် 45 သန်း ပြန်ရထားတာကြောင့် အသားတင်ကုန်ကျ စာရိတ်က သိပ်မများခဲ့ ပြန်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ဒေးဗစ် ဆေးဗား ၊ အော်တာမန်ဒီ တို့နဲ့ လက်ခွဲခဲ့သလို ၊ လက်ရှိမှာလဲ အဓိက တိုက်စစ်မှုး အဂွေးရိုး နဲ့ပါ ထပ်မံ လမ်းခွဲထားပြန်တာကြောင့် လစာ ပေးချေမှု အပိုင်းမှာလဲ အတော်လေးကို ဝန်ပေါ့သွားပါတယ်။
အင်္ဂလန် လူငယ် တောင်ပံ ကစားသမား ဆန်ချို ဟာ ဒေါ့မွန် ကနေ ယူနိုက်တက်ဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမယ့် ၊ မန်စီးတီး က အဲဒီ အပြောင်းအရွှေ့ ကနေ ပေါင် 10 သန်းဝန်းကျင် ရရှိထားပါတယ်။ ဒါဟာ 2017 ခုနှစ် က ဒေါ့မွန် အသင်းဆီ ရောင်းချလိုက်ချိန်မှာ ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ Sell-on clause အချက် ကနေ ပြန်လည် ရရှိလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိုက်ပစ်ဇ် အသင်းဆီ အငှားနဲ့ သွားရောက် ကစားခဲ့တဲ့ အိန်ဂျလီနို ၊ လိဒ်ယူနိုက် ထံ သွားကစားခဲ့တဲ့ ဂျက် ဟာရစ်ဆင် တို့ဟာ အပြီးသတ် ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာကြောင့် ၊ အဲဒီ အပြောင်းအရွှေ့ နှစ်ခုကနေလဲ ပေါင် 28 သန်း အထိ ရရှိထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူငယ်တိုက်စစ်မှုး အန်မီချာ ကို ဝုဖ်ဘတ် အသင်းဆီ ပေါင် 7.2 သန်း နဲ့ ရောင်းချထားပြန်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဆားဘီးယား ကွင်းလယ် ကစားမသားလေး အိုင်ဗန် အီလီဆစ် က ဗီရိုနာ အသင်းကိုလည်းကောင်း ၊ ဗီနီဇွဲလား ကွင်းလယ် ကစားသမား ယန်ဂယ် ဟာရဲရား ၊ လူငယ် တောင်ပံ ကစားသမား မော်ဂန် ရော်ဂျာ ၊ ဂျေဒန် ဘရိဖ် တို့က အသင်းပြောင်းဖို့ အလားလာတွေ ရှိနေပြန်တာကြောင့် ၊ အဲဒီ အပြောင်းအရွှေ့ တွေကနေလဲ ပေါင် သန်း 30 ဝန်းကျင်ခန့် ထပ်မံ ရရှိဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
အကယ်၍ ဟယ်ရီကိန်း နဲ့ ဂရေးလစ်ချ် တို့သာ ရောက်ရှိလာမယ် ဆိုပါက ကွင်းလယ် ကစားသမား တဦးဖြစ်သူ ဘာနာဒို ဆေးဗား ကို ထပ်မံရောင်းချဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေများ သလို ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ ပွဲထွက် ကစားသမား နေရာပျောက်ခဲ့တဲ့ ခံစစ်မှုး လာပေါ်တေး ကလဲ အပြောင်းအရွှေ့ ကောလဟာလ သတင်းတွေ ပေါ်ထွက်လျှက် ရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် မန်စီးတီး ဟာ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် ကစားသမား နှစ်ယောက် ကို ပေါင် 100 သန်း ဝန်းကျင်တွေ နဲ့ ကမ်းလှမ်းထားသည့်တိုင်အောင် ၊ ဖိအား တစုံတရာ မရှိပဲ ယုံကြည်ချက် အပြည့်နဲ့ လှုပ်ရှားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။